Olee otú tupu iji Xbox One N'ihi Christmas?
Ike na-eche na-esi gị aka na ọhụrụ Xbox Otu? Ọ bụ adịghị kwa n'ebe dị anya ugbu a, ihe na-erughị 3 ụbọchị! Dị ka nke a nnọọ oge m na-ede isiokwu a, oge uhuruchi. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọmụma na ekele na Xbox One iji wuchaa gị Christmas onyinye chọrọ afọ a, na ị na bịara nri ntụpọ! Kpọgidere uko akpata ọ ga-a bumpy na-agba ịnyịnya!
Xbox Onye Ụbọchị mwepụta na Ahịa
Olee otú tupu iji ihe Xbox One maka Christmas?
Xbox Onye Nga Launch Nyocha
2013 Best Ezumike Games maka Xbox One
The ukara tọhapụ ụbọchị maka Xbox One na ndokwa maka 22nd nke November, 2013 (a Friday). The n'ire price nke a set nke Xbox Otu bụ $499.99, nke na-agụnye Kinect nakwa dị ka ngagharị controllers. Otú ọ dị, ị nwekwara ike na-agagharị site na bundles awa; na ụfọdụ ndị na-ewu ewu egwuregwu; ngwa ma ọ bụ ọbụna Xbox LIVE si otu.
Xbox Onye ụdịdị.
Ọ na-wuru na-na-8GB esịtidem ebe nchekwa na ụlọ yiri 8 isi na ya CPU dị ka ọhụrụ ulo oru PlayStation 4 (ihe na-erughị otu izu gara aga na 15 nke November maka nanị North American si ahịa, ma ga-launching n'ụwa nile na 29th nke November). The 500GB nke nchekwa dị maa enyere mbo mbuli gị onye nchịkọta videos, egwuregwu, music na ọtụtụ ndị ọzọ. Nke ahụ bụ ihe fọrọ nke nta a ịrịba abụọ-si ya ụzọ.
8 isi Microsoft Custom CPU na 8GB esịtidem ebe nchekwa (DDR3)
500GB nke ohere nchekwa na mpụga nchekwa site USB
Optical mbanye maka Blu-Ray na DVD
USB 3.0 (3 ọdụ ụgbọ mmiri)
Wi-Fi Direct maka ngwaọrụ njikọ
Na-akwado ojii nchekwa
Maka ozi ọzọ, lelee ya HERE.
Rịba ama: Ọ bụ a amanyere bụ iwu update maka ụbọchị, otu.
Ị ga-enwe ike na-edebe gị iji ma ọ bụ tupu iji ihe Xbox One maka Christmas si ghọtara Jeriko dị ka GameStop, Walmart, Best Buy ma ọ bụ Ụmụaka "R" Anyị na Amazon. The ndị ọzọ isi online bidding saịtị dị ka Ebay na-amalite na na kasị ala price nke $ 700. N'ihi ya, ọ bụ kasị mma izere ya ma ọ bụrụ na ị na-ahụ n'ezie sikwara ike njite aka otu! Otú o sina dị, ọ bụ a kwesịrị ego ma ọ bụrụ na ọ na-enyere iji mee ka ezinụlọ ahụ dum ma ọ bụ enyi gburugburu nso n'oge celebrative oge. Dị ka a nwayọọ na-echetara, dị nnọọ aga site gị n'aka.
N'ụzọ dị mwute, ị ga-enwe ike na-egwu gị Xbox 360 ma ọ bụ ndị ọzọ merela okenye console si egwuregwu na Xbox One dị ka ọ bụ bụghị azu azu dakọtara. Nke a bụ na-akụda mmụọ, ma na-enye gị nkasi obi ụfọdụ, ọ dịghịkwa ọhụrụ ulo oru PlayStation 4. Ya mere, n'ebe ahụ ka ị na-aga!
The Xbox Onye ga scrap kwụsịrị ọrụ mbụ hụrụ na Xbox 360 nke nwere ikike ịgbatị console n'ime a Windows Media Center (ie mirror ọdịnaya si PC na TV). Nke a ga-ugbu a-anọchi site SmartGlass atụmatụ nke ga-eme ka onye ọrụ na-yiri ọdịnaya ha smartphones ma ọ bụ mbadamba ka console kama.
Na oge, e nweghị okwu ma ọ bụ ndepụta dị na ihe ụdị faịlụ ga-Xbox otu na-akwado na Olileanya ọ ga-enye a ubé wider nhọrọ tụnyere ya ụzọ. The Xbox 360 pụrụ dịkarịa ala playback video faịlụ na usoro nke WMV, VC-1, MPEG-1, MPEG-2, H.264, MPEG-4 nakwa audio echekwara n'ụdị WMA na MP3. Otú ọ dị, agaghị m anya ma ọ bụrụ na ha nwere stricter iwu yiri ya ike na-ama, na PS4 na okwu nke na-akpọ azụ gị videos. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata gị faịlụ tupu, nanị na-agụ n'ime otú i nwere ike ikpebi na nri video Ntụgharị nri HERE.
2013 Best Ezumike Games maka Xbox One - Ezigbo maka Christmas
Ọ bụrụ na ị na-egwuri ụfọdụ nke egwuregwu na ga-achọ ịmata ihe banyere ha, ị nwere ike mfe elele ya na ma GameTrailers ma ọ bụ IGN World. Ị ga-enwe na-agụ site na reviews, ahịa, ndakọrịta, mmelite na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ogbu si n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ IV: Black Flag
Oku nke ọrụ Ghosts
Nwụrụ Anwụ na-esiwanye 3
Lego iju Super Heroes
Mkpa maka Speed: rivals
Skylanders: dere Force
Chọrọ iji na-enweta egwuregwu ka akụkụ nke gị na-abịa Christmas onyinye mgbanwe? Ị mma jide n'aka na ọ bụ playable na consoles na ha nwere ma ọ bụ ọzọ ọ ga-a ihere. Na-agụ ihe n'ime Top 20 Best-ere Game Aha n'ihi na gị na consoles. Ọ Aga eleghị anya na-enye gị a mma echiche.
iFlicks Alternative: Awesome iTunes Ọbá akwụkwọ, Faster, More Advanced
> Resource> Video> Olee otú iji tupu iji Xbox One N'ihi Christmas?